#ထိုင်းနိုင်ငံ၊ # စူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ #လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ #၂၃.၂.၂၀၁၅ | democracy for burma
#ထိုင်းနိုင်ငံ၊ # စူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ #လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ #၂၃.၂.၂၀၁၅
tags: ထိုင်းနိုင်ငံ၊, လူသတ်မှု, ၂၃.၂.၂၀၁၅, Burma, BURMESE NATIONAL, CHAW NGE NGE, CLIP, KOH SAMUI, migrant worker, Myanmar, SURATHANI, Thailand, women killed
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ ကော့စမွေကျွန်းတွင် ၂၃.၂.၂၀၁၅ မနက် ၅ နာရီခွဲတွင် လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
သေဆုံးသူမှာ မြန်မာမိန်းကလေး မချောငယ်ငယ် ( ခ )ငယ် အသက် ၂၂ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့၊ မုရစ်ကလေး ကျေးရွာနေ ဦးညွန့်ဆွေ ဒေါ်ဝင်းလှိုင် တို့ရဲ့ သမီးငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လာလုပ်တာ တစ်ပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
PHOTOCR. Htet Thurein Min Htun
မိန်းကလေးမှာ ပါးစပ် ၊ လည်ပင်း၊ မျက်နှာ တို့ကို အဝါရောင်တိပ်များ အထပ်ထပ် ဖုံးကပ်ကာထား၍ အဝတ်မဲ့ ကိုယ်ဗလာ ပုံစံနီးပါးဖြင့် သေဆုံးနေခဲ့တာပါ။ သူမကတီရှပ်ပြာပေါ်ဖြူ စင်းကြားလေးနဲ့ ကိုယ်ကြပ်ဘောင်းဘီ အနက်ခံအဖြူ စက်လေးဝတ်ထားပါတယ်။ အင်္ကျီကို ရင်ဘတ်ထိဖော်ထား၍ ဘယ်ရင်အုံတွင်သွားကိုက်ရာများတွေ့ရပါတယ်။ ဘောင်းဘီကိုလဲဒူးအောက်ရောက်တဲ့အထိချွတ်ထားခံရပါတယ်။
သေဆုံးသူအနီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင် မှာ ဆေးလိပ်တို များ၊
ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်အိတ် ၂ စုံ၊သေဆုံးသူစီးလာသော လိမ္မော်ရောင်မိန်းမစီးဒေါက်မြင့်ဖိနပ် ၁ စုံ။ရဲများပြောကြားချက်မှာ လူဆိုးများသည် သေဆုံးသူအား မုဒိန်းကျင်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ် မိန်းကလေးကအသားကုန် အော်သောကြောင့် အသံမထွက်စေရန် ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကိုအတင်းဖိပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် မိန်းကလေးမှာ အသက်ရှူကြပ်လာကာ နောက်ဆုံးတွင်သေသွားခဲ့ရပါတယ်။
လူဆိုးမှာ ၂ ယောက် အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။( မိန်းကလေး ချစ်သူလဲ ပါဝင်နိုင်တယ်ဟု ယူဆမိပါတယ်လို့ ထိုင်းရဲများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။( ထင်မြင်ယူဆချက်သာ )) ထိုင်းရဲများနဲ့ဆန့်ကျင်ကာ
သူ့အမ စုစုကျော် ကတော့ သူတို့ရိုးရာလိပ်ပြာခေါ်၍မေးကြည့်ခဲ့ရာသူ့ကောင်လေးနဲ့အတူပါအဖော် ၂ ယောက် ပေါင်း၍ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြကာ ပါလာသောပိုက်ဆံများအားလည်းသူတို့ယူသွားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ယခုတော့နယ်မြေ ၈ စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူရဲများလည်း ရောက်လာကြကာသေဆုံးသူနဲ့ ရင်းနှီးသူ အားလုံးကိုစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ဆက်လုပ်၍ အမှုမှန်ပေါ်ရန် အမြန်ဆုံး
တိကျသေချာစွာ သိရှိရပါက ထပ်မံဖော်ပြပေးပါမည်။ cr. Htet Thurein Min Htun
from → Burma, MYANMAR, Thailand
← #DKBA #ရှင်းချက်ထုတ် #STATEMENT #INTERNET #MEDIA #KOKANG
#BURMA #MYANMAR #WOMEN #MURDERED #KOH #SAMUI #SURATHANI →
#BURMA #MYANMAR #BUDDHISTS #DONT #WANT #GET #KILLED BY #RADICAL #MUSLIMS AS IN #SOUTH #THAILAND